Last nohavaozina: Mey. 13 2019 | 3 min namaky
Misy fitsipika, rehefa niaraka? Mazava ho azy fa misy. Maro amin'izy ireo, raha ny marina, fa ny ankamaroan'izy ireo dia kolontsaina miankina ary afaka miovaova arakaraka ny firenena ho any amin'ny hafa sy avy amin'ny foko iray ho an'ny hafa. Na izany aza, misy fitsipika fototra manan-kery sisa rehetra manerana izao tontolo izao. Eto dia ny 10 didy ny vehivavy dia tokony hanaja, rehefa niaraka:
1. Miverena Miantso amin'ny Fomba Ara-potoana
Vehivavy toy ny manala ny fotoana alohan'ny fahazoana indray ny lehilahy izay toa tia azy ireo. Raha toa ka manana tombontsoa ao izany olona izany, koa, ianao hiverina ny antsony amin'ny fomba ara-potoana. Na dia te-milalao mafy mba, tsy miezaka hahazo ny 48 ora fetra tsy misy antony tsara. Nialany ny tanàna dia tsy manan-kery intsony ny fanazavana. Ny olona rehetra dia manana finday ankehitriny, na efa rehetra.
2. Manajà ny Fampanantenana
Mety hieritreritra ianao fa ho mora kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy any an'ala mampiaraka anaty ala. Mino izany na tsy, izany dia tsy marina. Tsy mora foana ny mahazo ny herim-po mba hangataka ny vehivavy avy. Raha nanao izany, ary hoy ianao eny, miezaka hifikitra amin'ny drafitra. Aza fotsiny hoe hanafoana amin'ny minitra farany. Mety hahazo ny fahatsapana ianareo tsy ho azy fa be. Tsara, tsara dia tsara tsy mba ho, fa tahaka izany dia tsy tokony manaiky eo amin'ny toerana voalohany.
3. Aoka Azy ho Loha Laharana
Toa izany koa ve efa lany andro ho anao? Mety ho gaga ianao hahita fa maro ny zavatra mbola nanao sekoly taloha lalana. Maro ny olona tia manao ny mpihaza, farafaharatsiny kely. Manaiky haza, fa hanampy azy raha toa ka mila ho amin'ny fandefasana azy famantarana ny marina.
Ilaozy ity lohahevitra ity ho chit firesahana amin'ny vehivavy sakaizany! Ny zava-pisotro eo ankizivavy dia toe-javatra tsara kokoa ny miresaka momba ny taloha. Nefa tsy manafinafina ny izany, tsy mampiharihary muddied rehetra lasa nandritra ny dingana voalohany amin'ny fifandraisana.
5. Tandremo ny Focus sy Mitsikia
Ny tsiky dia sarobidy noho ny iray taonina mahaforona. Izany no mahatonga ny tavany, ary mamela ny mety ho tia hahita ny tsara indrindra avy aminao. Raha sendra daty, miezaka mampifantoka ny saina azy, ary tsy nitodika ny lohanao rehefa hafa ry zalahy, na dia mety ho ireo mafana. Henoy ny inona izy ny hoe:, maso hihazonana fifandraisana, ary ho anjara. Izany no toe-tsaina misy olona manantena. Raha toa ianao ka mangidy, varimbariana, ary mampalahelo, mba hanadino ny hoe rehefa afaka izany,.
6. Tsy misotro be loatra
Ny rivo-piainana tsotsotra ny aina sy ny. Toa ny zava-drehetra ho miasa tsara fotsiny. Mahatsapa tratran'ny fakam-panahy manan-teny kely na solomaso Molotov ny divay. Aza! Tsy misy olona milaza ianao tsy mahazo mikasika toaka. Fotsiny aza BE LOATRA. Ny vokatra Tsy dia sexy araka ny hevitrao.
7. Aza mitady volamena toy ny digger
Inona no tianao, nahita ny soulmate, na loharanom-bola maharitra. Aza mitondra tena toy ny hoe izy no banky. Raha manapa-kevitra ny hividy izay saotra ho anareo, manaiky izany, fa aza mangataka azy io. Koa, tsy mitovy hevitra ny handoa ny hofan-trano izy, na manome anareo ny vola isam-bolana araka ny mety fotsiny farany hahatsapa ho toy ny mividy ny fitiavanao.
8. Aoka ianao ho vehivavy
Tsarovy ny fitsipika fototra ny fitondran-tena ny ray aman-dreninao, raha nampianatra anao ianao zanak'osy? Mbola mampihatra rehefa niaraka. Aza manadino ny fomba sy mitandrina ny fampiasana ny teny sarobidy "azafady" ary "misaotra" na dia tsara fantatrao azy efa. Ao an-tsainao ny fihetsika sy ny tsy nanitatra ny ranjony misokatra toy ny dude na dia ianao manao pataloha. Ny vehivavy voadio tsy manadino ny fitsipika fototra kely ireo na dia aorian'ny taona maro ny fanambadiana.
9. Asehoy ny mahaliana
Mandoa ny Guy ary fandokafana dia zavatra vehivavy matetika manadino hanao. Ny olona dia toy ny mora mahatsapa ny teny sy ny fihetsika tsara toy ny anay. Aza misalasala milaza aminy fa toa lehibe ao amin'ny lobaka vaovao Niakanjo indrindra ho anao. Asehoy ny liana raha manao zavatra tsara ho azy! Dia mitondra anareo avy amin'ny sakafo hariva? Nahoana ianareo no tsy manasa azy ho ny toerana ho an-trano nanao sakafo hariva ho an'ny fiovana? Fantatrareo izay ny toerana tena mofomamy dia? Jereo ny fomba fahandro sy hanendasany ny tsara ho azy batch. Fihetsika tsotra toy izany mandefa hafatra. Dia hasehoko azy fa miahy ary ianareo kosa manao ny ezaka, koa.
10. Aza mahazo mitanjaka amin'ny daty voalohany
Fitia eo noho eo? Maro ny olona no milaza fa tena manana Potika Be. Fa, aoka ny hoe raiki-pitia anao hatramin'ny fotoana voalohany teo amin'ny samy maso ary ny fifanoloran-. Na izany aza, miezaka ny hanajanona ny fahazoana mitanjaka amin'ny daty voalohany. Afaka hanoroka sy namihina, fa nanao izany mora foana ny tombony. Ahoana koa ianao dia hiresaka momba ny fitiavana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy?